သုံးဘီးစက်ဘီး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘီးသုံးလုံးတပ်ဆင်ထားသည့် လူအားဖြင့် မောင်းနှင်သောယာဉ်တမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ဘီးသုံးလုံးတပ်ဆင်ထားသည့် လူအားဖြင့် မောင်းနှင်သောယာဉ်
သုံးဘီးစက်ဘီး သို့မဟုတ် တျိုင်ဆိုင်ကယ်(tricycle) သို့မဟုတ် တျိုက် (trike - အတိုကောက် အခေါ်အဝေါ်)    သည် ဘီးသုံးလုံးတပ်ဆင်ထားသည့် လူအားဖြင့် မောင်းနှင်သောယာဉ်ကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းကို ဓာတ်ဆီ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သုံး မော်တာတပ်ကာဖြစ်စေ၊ သဘာဝမြေဆွဲအားအကူအညီသုံးကာဖြစ်စေ မောင်းနှင်ခြင်းများလည်း ရှိသည်။
အထူးသဖြင့် ဆိုက်ကားအပါအဝင် တစ်ချို့ သုံးဘီးစက်ဘီးများကို ခရီးသည်တင်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ရန်ဖြစ်စေ ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများတွင် အသုံးပြုခြင်းများကိုလည်း အာဖရိကတိုက်နှင့် အာရှတိုက်တို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရသည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင်မူ လူကြီးသုံး သုံးဘီးစက်ဘီးများကို အားလပ်ချိန်အပန်းဖြေမှုအတွက်ဖြစ်စေ၊ စျေးသွားစျေးလာအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ သုံးဘီးစက်ဘီးကို နှစ်ဘီးစက်ဘီးနှင့်ယှဉ်လိုက်လျှင် မလဲအောင် ပို၍ထိန်းရလွယ်သဖြင့် ကလေးများနှင့် အသက်ရွယ်ကြီးသူများကပို သဘောကျကြသည်။ သို့သော်လည်း သမရိုးကျ သုံးဘီးစက်ဘီးသည် ကွေ့သောအခါများတွင် ဘေးတိုက်လဲကျတတ်သဖြင့် စီးနင်းသူအနေဖြင့် အထူးသတိထားရန် လိုပေသည်။ သမရိုးကျမဟုတ်သော အိပ်နင်းစက်ဘီး ဒီဇိုင်းများတွင်မူ ဟန်ချက်(centre of gravity) ကို နိမ့်ချထားသဖြင့် သမရိုးကျ သုံးဘီးစက်ဘီးကဲ့သို့ လဲကျရန် မလွယ်ကူလှပေ။
စတက်ဖဲန် ဖာဖလာ (Stephan Farffler)၏ လက်ဖြင့်မောင်းနှင်ထိန်းချုပ်နိုင်သော သုံးဘီးတပ် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်
၁၉-ရာစုတွင် အီရန်နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုသော သုံးဘီးစက်ဘီး
သုံးဘီးတပ် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကို ၁၆၅၅ သို့မဟုတ် ၁၆၈၀-ခုနှစ်တွင် မသန်စွမ်း ဂျာမန်လူမျိုး စတက်ဖဲန် ဖာဖလာ (Stephan Farffler)က သူကိုယ်တိုင် သွားလာလှုပ်ရှားမှုအတွက် အထောက်အကူပြုရန် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် နာရီလုပ်ပညာရှင် ဖြစ်သောကြောင့် လက်လှည့်ခြင်းအား (hand cranks)ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သော သုံးဘီးယာဉ်တစ်စီးကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ 
↑ The Little Book of Trikes. Adam Quellin. Veloce Publishing Ltd, 1 Dec 2011
↑ The Hanukkah Trike. Michelle Edwards, Kathryn Mitter. Albert Whitman and Company, 1 Sep 2010
↑ Tilting Trike. Popular Science Jul 1980.
↑ Keeping Balance: A Psychologist's Experience of Chronic Illness and Disability. Katherine Cuthbert. Troubador Publishing Ltd,3May 2010
↑ Steve Greene (2011)။ Free on Three: The Wild World of Human Powered Recumbent Tadpole Tricycles။ iUniverse။ p. 21။ ISBN 978-1462021604။
↑ "Medical Innovations - Wheelchair" (2007). Science Reporter 44.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သုံးဘီးစက်ဘီး&oldid=734597" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၄:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။